Mogadishu Journal » Madaxda Galmudug oo muddo kordhin iskood ah sameysatay
Mjournal :-Madaxa maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa sheegay inaysan Galmudug ka dhici doonin doorasho sanadkan balse ay ka dhici doonto doorashada saddex sano kadib.
Sheekh Maxamed Shaakir oo ka hadlay kadib markii ay maanta ku yeesheen magaalada Dhuusomareeb shir golaha wasiirada Galmudug ayaa sheegay in heshiiskii Maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna uu yahay bilowga maamul goboleedka Galmudug.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ka qeybgalay shirka ayaa dhinac fadhiyay markii uu Madaxa Maamulka Galmudug ahna Madaxa Kooxda Ahlu Sunna uu ku dhowaaqay warkan.
“Maamulka Abaabulkiisa iyo dhismihiisa rasmiga waxa uu bilowday markii Madaxtooyadda Soomaaliya lagu kala saxiixday heshiiskii dhexmaray Galmudug iyo Ahlusunna.”ayuu yiri Sheekh Axmed Shaakir.
Maamulka Galmudug ayaa labo u kala qeybsan iyadoo qeyb ka mid ahna ay xaruntoodu tahay magaalada Cadaado halka qeybta kalana ay xaruntoodu tahay magaalada Dhuusomareeb.
Waxaa soo baxayay todobaadyadii la soo dhaafay warar sheegaya in la qaban doono doorashada Madaxweynaha Galmudug afar bilood kadib.
adaxa maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa sheegay inaysan Galmudug ka dhici doonin doorasho sanadkan balse ay ka dhici doonto doorashada saddex sano kadib.
Sheekh Maxamed Shaakir oo ka hadlay kadib markii ay maanta ku yeesheen magaalada Dhuusomareeb shir golaha wasiirada Galmudug ayaa sheegay in heshiiskii Maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna uu yahay bilowga maamul goboleedka Galmudug.Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ka qeybgalay shirka ayaa dhinac fadhiyay markii uu Madaxa Maamulka Galmudug ahna Madaxa Kooxda Ahlu Sunna uu ku dhowaaqay warkan.“Maamulka Abaabulkiisa iyo dhismihiisa rasmiga waxa uu bilowday markii Madaxtooyadda Soomaaliya lagu kala saxiixday heshiiskii dhexmaray Galmudug iyo Ahlusunna.”ayuu yiri Sheekh Axmed Shaakir.
Ciidamada Puntland oo isaga baxay Saldhigyo ay ku lahaayeen Buuraha Galgala